ဒုတိယအကြိမ် ဂဇက်ကွန်ဖရင့်စ်ပို့စ် (၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » ဒုတိယအကြိမ် ဂဇက်ကွန်ဖရင့်စ်ပို့စ် (၁)
ဒုတိယအကြိမ် ဂဇက်ကွန်ဖရင့်စ်ပို့စ် (၁)
Posted by လံုမေလးမြန္မြန္ on Jul 23, 2013 in Best Web Awards, Myanmar Gazette | 34 comments
မိုးလေးက မဆိုစလောက်လေး ဖွဲဖွဲကျနေသည်။ ရာသီဥတုက အေးမြ၏။ မိုးဖွဲကြားက ကန်တော်ကြီး၏ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း စိတ်ကို လန်းဆန်းစေသည်။ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် မန္တလေးဂဇက်အဖွဲ့ဝင်များ ဆုံစည်းပွဲ နှင့် မန်းဂဇက်ချစ်သူများ စာပေဆု၊ ကဗျာဆုပေးပွဲ ကျင်းပမည့်နေ့ပင် ဖြစ်ပေသည်။
Shanti စားသောက်ဆိုင်ထဲသို့ ဝင်လိုက်သည်နှင့် လက်ဝဲဘက်တွင် ဧည့်ကြိုကောင်တာကို တွေ့ရသည်။ တက်ရောက်မှတ်တမ်းလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသည်နှင့် ရွာလူကြီး ကိုပေါက် (မန္တလေး) က လက်ဆောင်ပေးသော ဓာတ်ပုံများကို လက်ခံရရှိနိုင်သည်။ ဓာတ်ပုံထည့်ထားသောမန္တလေးဂဇက်လိုဂိုပါ စာအိတ်မှာ ရွာသား ကို P Chogyi ၏ စေတနာဖြစ်၏။ (မအားလပ်သည့်ကြားက ပွဲသို့ အစောကြီးရောက်လာပြီး လက်ဆောင်များကို လာပေးသွားခြင်းဖြစ်သည်။) ထို့နောက် Green Rose စီစဉ်ထားသော “မန်းဂဇက်ချစ်သူများ၏ အမှတ်တရစုစည်းမှု (၁)” စာအုပ်များကိုလည်း ကျပ် (၂၅၀၀) ဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်သည်။ (မဝယ်မနေရ အတင်းရောင်းသည်…။)
ဧည့်ကြိုစားပွဲဘေးတွင် ပထမအကြိမ်တွေ့ဆုံပွဲကို တက်ရောက်ကြသော ရွာသူားများ အမှတ်တရလက်မှတ်ရေးထိုးထားသော ဗီနိုင်းကို ချိတ်ဆွဲထားသည်။ ဧည့်ကြိုစားပွဲအနောက်ဘက်၊ ဆိုင်နေရာအလယ်တွင် စားပွဲများဘက်သို့ မျက်နှာမူထားသော စတိတ်စင်ရှိသည်။ စတိတ်စင်၏ လက်ယာဘက်တွင် ဆုပစ္စည်းများ တင်ထားသော စားပွဲရှိပြီး ထိုစားပွဲ၏ ဘေးတွင်မူ ယခုတွေ့ဆုံပွဲအတွက် အမှတ်တရရေးနိုင်သည့် ဗီနိုင်းကို ချိတ်ဆွဲထားသည်။
နံနက် (၇) နာရီကတည်းက ရောက်ရှိပြီး အခမ်းအနားပြင်ဆင်နေသူများမှာ ဦးပါလေရာ၊ ဦးကြီးမိုက်၊ ဦးစွယ်တော်ရွက်၊ အမတ်မင်း၊ ဆယ်အိမ်မှူး နှင့် Cobra တို့ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် သတင်းထောက် ကိုကောင်းကင် ကိုလည်း ကင်မရာတစ်လုံးနှင့် တွေ့ရပြီး ရွာသူချော ငြိမ်းငြိမ်း ကတော့ ဧည့်ကြိုနေရာတွင် ကြိုဆိုနေသည်။ (၈) နာရီခွဲအချိန်လောက်တွင် ရောက်ရှိလာသူများမှာ ဦးဆာမိ၊ အံစာတုံး၊ အလင်းဆက်၊ သိကြားမင်း ဦးမာဃ၊ လုံမလေးမွန်မွန် နှင့် လူကလေး တို့ ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်
ရွာသူချောများဖြစ်သည့် ငြိမ်းငြိမ်း၊ လုံမလေးမွန်မွန် နှင့် လူကလေး တု့ိက ဖော်ရွေသောအပြုံးဖြင့် ကြိုဆိုဧည့်ခံရေးတာဝန်ကို ယူကြလေသည်။ (အဟိ) ဆယ်အိမ်မှူးကလည်း သူ၏ ဓာတ်ရှင်စက်ကို ဝင်ပေါက်တည့်တည့် သို့ ချိန်ထားလေသည်။
ပြာလောင်ခတ်အောင် အလုပ်ရှုပ်နေသူ နှစ်ယောက်ကား အလင်းဆက် နှင့် သဂျားမင်း တို့ ဖြစ်သည်။ မလာနိုင်သူများ မှာလိုက်သောကြောင့် စာအုပ်တွင် အမှတ်တရလက်မှတ်များ လိုက်ရေးခိုင်းရာမှ လက်ထဲတွင် စာအုပ် (၄) (၅) အုပ် ဖြစ်လာပြီး လာသမျှလူများကို စာအုပ်အတင်းထိုးပေးနေတော့သည်။ ထို့နောက် ရောက်လာသူများက စာအုပ်ဝယ်ပြီးသည်နှင့် အပြန်အလှန် လက်မှတ်ထိုးပေးကြရင်း ဧည့်ကြိုကောင်တာတစ်ခုလုံး နှုတ်ဆက်သံ၊ စာအုပ်ရောင်းသံ၊ လက်မှတ်ထိုးပေးသံ များဖြင့် ဆူညံနေတော့၏။
မကြာမီတွင် ရောက်ရှိလာသူကား မန်းမှာနေသော ကိုခင်ခ ဖြစ်၏။ တစ်နေ့တာအလုပ်များ များပြားသည့်ကြားကပင် ခဏတာလာရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ တက်ရောက်မှတ်တမ်းတွင် လက်မှတ်ထိုး၊ ကိုပေါက်၏ လက်ဆောင်ကိုယူ၊ စာအုပ်များဝယ်၊ ရောက်နေသူများအားလုံးကို နှုတ်ဆက်ပြီး ပြန်သွားသည်။ ထို့နောက် ခရမ်းရောင် ဝတ်စုံလေးနှင့် တစ်ယောက်တည်း ရောက်လာသူကား ရေငါး (Water Fish)။ နောက် ရေဆန်လမ်းက ပန်းတစ်ပွင့်ပိုင်ရှင် ဦးမျိုးသန့်နှင့် သားတော်မောင် ကောင်းကောင်း။ Easy Cook တင်ဆက်သူ အန်တီဝေ ကလည်း အပင်လေးတစ်ပင်ကို ပိုက်ပြီး ရောက်လာသည်။ အန်တီအိ အတွက်ပါတဲ့။
အစိမ်းရောင်ဝတ်စုံလေးနှင့်အိတ်ကလေးပိုက်ပြီး မိုးရွာထဲက အပြေးကလေး ရောက်လာသူကား ဥက္ကဌကြီး အန်တီဒုံ။ ရောက်လာသည်နှင့် “အန်တီ နဲ့ အန်တီမမ
အတွက် စာအုပ် (၁၂) အုပ်” ဆိုပြီး (၁၀) အုပ်ကို ဖယ်၊ (၂) အုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးရန် ပေးပြီး ဟိုဘက်စားပွဲတွင် အလုပ်ရှုပ်နေလေတော့သည်။ နောက် ရွာလူကြီးတစ်ဦးဖြစ်သူ အဘဖော၊ စာအုပ်စီစဉ်သူ Green Rose၊ နောက် ကိုအာဂ နှင့် မနွယ်ပင် မောင်နှမ၊ မ Etone နှင့် မရွှေအိ တို့ ညီအစ်မကလည်း အသီးသီး ရောက်လာကြသည်။
ထပ်မံရောက်ရှိလာသူကတော့ မမြင်ဖူးသေးသော အစ်မတစ်ယောက်။ လက်မှတ်ထိုးစာရွက်ကို ကမ်းပေးရင်း “ဘယ်သူလဲ မသိဘူးနော်” ဟု ဆိုတော့ “ဘယ်သူလို့ ထင်လဲ” တဲ့။ ငြိမ်းငြိမ်းက သေချာကြည့်ရင်း “မမိုချို… မဟုတ်ရင်တော့ မမှီ” ဟု ဖြေလိုက်မှ “မှန်းတာ တော်လိုက်တာ..အစ်မက မမိုချိုပါ”.. တဲ့။ ထိုအချိန်တွင် အပြင်ဘက်ကို လှမ်းကြည့်ရင်း အန်တီဒုံက ပြောလိုက်သည်။
“ဟယ်..ဟိုမှာ မှီ တို့လာပြီ..”
ဟုတ်ပါသည်။ မမှီ သည် သားကလေးကို လက်ဆွဲ၊ အိမ်အပြန်ပို့စ်တုန်းက ဗိုက်ထဲတွင်သာ ရှိသေးသော သမီးလေးကို ချီပြီး ဝင်လာပါသည်။ ကားတံခါးပိတ်ရင်း အနောက်က လိုက်လာသူက မမှီ၏ ခင်ပွန်း။ မမှီတို့ကို နှုတ်ဆက်ပြီးချိန်တွင် (မုန့်ဟင်းခါးသည်) ကိုအောင်မိုးသူ ကလည်း သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နှင့် ရောက်လာသည်။ နောက် ကင်မရာကြီးကိုထမ်း၊ သားလေးကို လက်ဆွဲပြီး ရောက်လာသူက ကိုမှော်ဆရာ၊သူ့နောက်က မှော်ဆရာမ (နောက်တာနော်.. )။ ထို့နောက် ရွာထဲက တက်တူးဆရာ ကိုသုဝေ ကလည်း တစ်ကိုယ်တည်း ချီတက်လာသည်။ ပြုံးပြုံးလေးနှင့် ထပ်ဝင်လာသူက အန်တီအိ။ သူကြီးသမီး မချာတူး ကတော့ ဗော်ကတို ပီသစွာ မြန်မာဝတ်စုံ ဝမ်းဆက်လေးနှင့် လှနေလေသည်။
ဦးနွေဦး ကလည်း ခန့်ခန့်ကြီး ဝင်လာသည်။ ထို့နောက် ဆံပင်တိုလေးနှင့် လှနေသော မနိုဗီ။ မနိုဗီကိုမြင်တော့ အိတ်အကြီးကြီးများ ပါလေမလားဟု အသည်းအသန် လိုက်ကြည့်ပါသော်ငြား မအားလပ်သောကြောင့် မဲကိစ္စမလုပ်ခဲ့နိုင်ကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာပြောသည်။ နောက် ရတနာပုံနေပြည်တော်သတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာအဖွဲ့ဝင် အန်တီ နီလာစိန်၊ ပန်းဆီရောင်ဝတ်စုံလေးနှင့် အပျိုကြီး (သူပြောထားလို့) ရွာတော်ရှင်ဆူး တို့လည်း ရောက်လာသည်။
မိုးကလည်း အတော်လေး သည်းထန်စွာ ရွာနေသည်။ လူစုံလောက်ပြီဟု ထင်ရသည့်အတွက် အချိန်ကို ကြည့်လိုက်တော် နံနက် (၁၀) နာရီကျော်။ သို့နှင့် ပွဲစတော့မည်
ဖြစ်သည့်အတွက် နေရာယူပေးကြပါရန် အခမ်းအနားမှူး ရွှေတိုက်စိုးက ကြေညာသည့်အခါ အားလုံးက စကားစများဖြတ်ရင်း အဆင်ပြေသည့်နေရာတွင်
ဝင်ထိုင်ကြလေသည်။ ပွဲစတော့မည်အချိန်တွင် သတိထားမိပြီး တွေ့လိုက်ရသူများကား ကိုရဲစည် နှင့် နောက်တစ်ဦး။ နောက်မှ သိရသည်ကား သန်းကြွယ်သူဌေး ဘာသာပြန် မောင်ဘလှိုင် ဖြစ်ပါသည်တဲ့။ သို့နှင့် နံနက် (၁၀) နာရီကျော်အချိန်တွင် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် မန္တလေးဂဇက်အဖွဲ့ဝင်များ ဆုံစည်းပွဲ နှင့်
မန်းဂဇက်ချစ်သူများ စာပေဆု၊ ကဗျာဆုပေးပွဲ ကို စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
(အပိုင်း (၂) ကို မျှော်ကြပါဦးနော်.. )
မွနိမွန် ဝါးတီးဖွင့်နေတဲ့ပုံ ရှိတယ်
အဲ့နေ့က လေတွေပေါရတာနဲ့ မောပြီး သိပ်မကြိတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး..
ဒါမယ့် ပွဲပြီးလို့ အိမ်အပြန် ဗိုက်အရမ်းဆာနေတဲ့အချိန်မှာ မန်းမှာနေတဲ့ လေးလေးတစ်ယောက်နဲ့ဆုံရင်း သူကျွေးတဲ့ ကြေးအိုးဆီချက်ကိုတော့ အပီအပြင် ဆွဲခဲ့ပါကြောင်း…
ပထမအကြိမ်တုန်းက မရောက်ဖြစ်ပေမယ့် ဒီအကြိမ်တော့ အနားလာပြီး ရစ်သီရစ်သီ လုပ်ခွင့်ရပြီ တတိယအကြိမ်တော့ တက်ဖြစ်အောင် လုပ်မယ်ဗျာ။
အဲဒီနေ့ ညနေ အားတဲ့အချိန်လေး ခဏတာမှာ အချိန်ပေးကာ လာရောက်တွေ့ရင် စကားစမြည်ပြောခဲ့ကြတဲ့
ရွာသူားတစ်ချို့ကိုလည်း ခင်ခ မှကျေးဇူးပါနော်။
သာမီးလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လေးလေး…
အစောကြီးသွားပြီး နှမ်းဖြူး… အဲ.. အဲ .. သွားအားပေးနှင့်တာပါ..။
9:40 ကျတော့ စင်မြင့်ရှေ့က ဖြတ်သွားတုန်း ရွှေတိုက်ကပြောတယ်…
ဦးပါ … ကိုးနာရီခွဲကျော်ပြီ… ဘယ်လိုလုပ်မတုန်း… တဲ့ ……
ကျူပ်ကလဲ ပြန်ပြောလိုက်တယ် …
ခဏလွှတ်ထားလိုက် ရွှေတိုက်ရေ… ဒါမှ တွေ့ဆုံပွဲအစစ် … လို့ …
လှမ်းခေါ်ကြ၊ လှမ်းအော်နှုတ်ဆက်ကြ ၊ နောက်ကြပြောင်ကြ၊ စကားတွေ ရေပက်မဝင်အောင်တွတ်ထိုးကြနဲ့…
လူလေး နှစ်ယောက်တစ်ပိုင်းနဲ့ကို အုံးအုံးထ ကြွက်ကြွက်ညံနေတာများ ……….
ပြောလို့ကို မဝနိုင်ဝူး… ပျော်စရာကြီး…
ပထမပိုင်းမှာတော့ ပွဲ စပြီ ….။
နောက်ပိုင်းမှာ ဆုယူဂျဒါ …
ဟိုစကား ဒီစကားတွေ ပေါဂျဒါကို
ဆက်လက် ရှုစားမယ်ဗျား ……..။
ဒီ စာ အလှ သရုပ်ဖော်နဲ့အတူ
ပုံရိပ်လေးတွေ ပါ ပါရင်
အလက်ဆင်း ပြောသလို စာ နဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ တွဲထည့်လိုက်ရင်…
ကိုယ်လဲ ပါဝင်သလို ခံစားနေရမှာ…
အဲလို ထည့်ပေးနော်.. နော်…
ဓာတ်ပုံတွေက မှော်ဆရာ လိုင်းမကောင်းလို့ မတင်နိုင်ဘူး။
ရန်ကုန်ကလူတွေ ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ပုံ တင်ပေးကြပါနော်။
SEA-ME-WE ပြတ်လို့ အင်တာနက်က ၁လ နှေးမယ်တဲ့။
ဒါပေမယ့် ဒို့ ဂဇက်ကတော့ မနှေးဘူး ဆရာ။
မြန်မာပြည်အင်တာနက်လိုင်းက ၈ ရက် ၈ လ ရောက်ခါနီးကာလ ဝန်းကျင်ဆို အဲလိုဘဲ ပျက်တလှည့် နှေးတလှည့် ဖြစ်နေကျပါ အမပဒုမ္မာရေ။
လုံမလေး အရေးကောင်းပုံက ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရသလိုပဲ။
ဒါပေမယ့် ကိုရီးယားကားလို ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်နေတော့……..
ပြောလော့ ရွာသူား တသောင်းကျော်သတဲ့.. အဟွတ် အဟွတ်… ပွဲလာပိတ်သက် အင်အား ၃၆ယောက်… ဟုတ်မှမလွဲရော ကိုးနဝင်း ယတြာချေတာ ဖြစ်မယ်.. ကွိ ကွိ ငှိ ငှိ ဟိ ဟိ….
ကိုယ့် မျက်ချေး ကို
ကိုယ် ပြန်မြင်အောင် ကြည့်ပါ ဒက်ဒီကြောင် … ဟောင် .. ဟောင် ..
မွန်မွန်ပို့စ်မှာ ဓါတ်ပုံတွေမပါတာတော့ ဟာတာတာကြီးဗျာ..
သော်သော် စာအုပ် ဝယ်ချင်တယ် ပြောနေတယ်။
ခု ဘယ်ပို့(စ) မှ ဓာတ်ပုံတွေ သိပ်မပါသေးသလိုပဲ။
ဓါတ်ပုံတွေရိုက်နေကြတာပဲ ၊ ဘယ်သူ့ဆီမလဲတော့ မသိ ၊
ကြည့်ရရင် ကောင်းမယ် ၊ မွန်မွန် အအေးပုလင်းမော့နေပုံတော့ရှိတယ် ၊
ပထမပွဲမှာတင် မလာဖြစ်တာ နောင်တရမိပါတယ်။
ပြုံးပြုံးလေးနှင့် အန်တီအိ လို့ရေးပေးတဲ့ လုံမလေးရေ…
မှီနဲ့ မိုချို ကို ခုမှတွေ့ရတာလေ…
ဝေဝေပေးတဲ့ နှင်းသီးပင်လေး စိုက်ထားလိုက်ပြီ…
သူကြီးပို့လိုက်တဲ့ ငရုတ်စေ့လေးတွေနဲနဲ ပျိုးထားတယ်…
ဝါသနာကို အားပေးတဲ့ ရွှေဇွန်း၊ခက်ရင်းလေးလဲ မဲပေါက်တယ်…
ဒီတစ်ခေါက် ကိုပေါက်ဝဋ်လည်ပြီ ။
သဂျီးပို့လိုက်တဲ့ မန်မိုရီကဒ်ပေါက်လို့ ပျော်ပါ့..ဟိ…
ဒါ့ပုံလေးတွေလည်း ထည့်ပေးပါ မမမွန်မွန်
ဓာတ်သေလေးနဲ့ ပါတွဲတင်ထားရင် ပိုကောင်းမယ်နော်.. စိတ်ပျက်တယ် ကွန်နစ်ချင် ရယ်..
ဓာတ်သေတွေ ထည့်ချင်ပါတယ်..ဒါမယ့်..အနော့်ဆီမှာ တစ်ပုံမှ မချိဝူး.. ကိုးနက်ရှင်မကောင်းတော့ မေးလ်ထဲပို့ပေးပါလို့တောင် တောင်းရမှာ အားနာလို့ စာချည်းသက်သက် လွှတ်လိုက်ရတာ အားနာပါတယ်… နားလည်ပေးကြပါနော်…
လုံမလေး အရေးနဲ့ ကိုယ်တိုင်ပွဲ ကို နွှဲလိုက်ရသလိုပါဘဲ။
အပိုင်း(၂) ကို မျှော်နေပါပြီ။
ဒီ လူငယ်တွေ ရဲ့ အားနဲ့ ပွဲ က ပိုပြီး စည်သွားတာပါ။
ဖတ်ပြီး ပွဲထဲ ပြန်ရောက်သွားသလိုပဲ၊
ဟိုဖက်လှည့်စကားပြောလိုက်ကြ ဒီဖက်လှည့် စကားပြောလိုက်ကြနဲ့
အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်စကား မပြောလိုက်ရသလိုပဲ ဟီဟိ
တစ်ပွဲလုံးကို ဟိုဘက်ကပတ် ဒီဘက်က ပတ် နဲ့
နောက် ၆လအကြာ ခြေခင်းလက်ခင်းသာတဲ့ ဆောင်းရာသီ
ဇန်နဝါရီလ ၂ဝရက်နောက်ပိုင်း တနင်္ဂနွေ(သို့)ပိတ်ရက် ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။
စိန်ခြူးကြာညောင် လာနိုင်အောင် ကြိုးစားပါနော်။
ရွာသူချောဆိုလို့ လမ်းလျှောက်တာတောင် မြေကြီးနဲ့ မထိတော့ဘူး မွန်မွန်ရေ…
မွန်မွန် ရေးထားတာဖတ်ရတာ နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ရောက်သွားသလိုပဲ။ အဲနေ့က အိမ်မှာကိစ္စရှိလို့ လောလောနဲ့ပြန်သွားရတယ်။ အားလုံးကိုတောင် သေချာမနှုတ်ဆက်မိဘူး။